Ihe ohuru di na gam akporo M Onye Mmeputa Preview 2 | Gam akporosis
Naanị taa Google eweputara mmelite nke abụọ nke gam akporo M Onye Mmepụta. Anyị ezutela atụmatụ ọhụrụ a nke Google na M / O 2015 mgbe ọ gwara anyị etu oge a ọ ga-esi abata Gam akporo M preview n'ime ogbe ato, nke izizi malitere na ogbako onye mmepe, nke abụọ bụ nke anyị nwere taa, na nke ikpeazụ ga-abata tupu ụdị nke ikpeazụ mgbe ọ malitere na ọdịda ka gam akporo Lollipop.
Nlele nke abụọ nwere ụfọdụ mgbanwe dị ịrịba ama, agbanyeghị na ọ ka bụ nhụchalụ onye nrụpụta ya mere ụfọdụ atụmatụ agaghị arụ ọrụ ruo oge ikpeazụ. Mgbanwe ụfọdụ dị na nyocha a bụ ọnọdụ ihu igwe maka ekwentị, na-enwe ike iwepụ akara ngosi na ọkwa ọkwa ma ọ bụ mgbanwe na ikikere. N'okpuru ị ga-ahụkwa njikọ njikọta maka mmelite maka ndị nwere nlele mbụ, n'agbanyeghị agbanyeghị OTA ga-abata na ụbọchị iji melite ya na ekwentị n'onwe ya n'ụzọ dị mfe.
1 Ihe nleghari ngwa ngwa
2 Ọnọdụ ihu ala maka Google Ugbu a Launcher
3 Ihuenyo ọhụrụ maka wijetị
4 Nhọrọ ihichapụ nseta ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo
5 Nhọrọ maka sistemụ sistemụ dịka iwepu akara ngosi site na ọkwa ọkwa
6 Nchekwa nchekwa na ntọala
7 Ọrụ emelitere
8 Etu esi wunye gam akporo M onye Mmepụta Preview 2
Ihe nleghari ngwa ngwa
Na nyocha Google nke mbụ chọrọ iju anyị anya site na mkpụrụedemede ederede na mkpụrụedemede ndị ahụ N'akụkụ maka ngwa ngwa ngwa. Oge a ọ gbanweela ihe niile ọzọ na-ahụkarị nke anọ na kọlụm anya nke na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị na nke ikpeazụ.
Ihe puru iche di iche bu na ugbu a ị nwere ike ngwa ngwa swipe site ngwa site na iji mpịakọta mpịakọta n'akụkụ aka nri, kpọmkwem ebe mkpụrụedemede ahụ dị.
Ọzọ nke pụta ìhè nhọrọ bụ ohere nke ịrụ ọrụ ma ọ bụ deactivating the apps apps. N'ebe a, enwere ekele na Google na-enye onye ọrụ ike niile ịgbakwunye ndepụta nke ngwa a.
Ọnọdụ ihu ala maka Google Ugbu a Launcher
Na launcher nke na-abịa na ndabara na nke gara aga, ugbu a, enwere ike iji ọnọdụ ihu igwe. Ọ bụrụ na ị pịa ogologo na desktọọpụ desktọọpụ wee gaa ntọala ntọala ahụ, ị ​​ga-ahụ nhọrọ abụọ. Otu iji rụọ ọrụ ndepụta nke ngwa ndị na-adịbeghị anya na drawer ngwa ahụ, nke ọzọ iji rụọ ọrụ ọnọdụ ihu igwe a maka launcher.
Ihuenyo ọhụrụ maka wijetị
Dị ka ọ dị na drawer ngwa, Google na-eweta mgbanwe ụfọdụ na wijetị n'oge a. Ugbu a enwere ike ihichapu ngwa ngwa site na ndepụta nke wijetị site na iji ogwe mmịfe n'akụkụ aka nri nke ihuenyo.
Ihe nkowa ozo bu mgbe ngwa nwere ihe karịrị otu wijetị, nke enwere ike ịnweta site na swipe n'akụkụ.
Nhọrọ ihichapụ nseta ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo
Ọzọ nke obere nkọwa ndị ahụ gam akporo M nwere kemgbe ekwuputara ya na isi okwu na Google I / O 2015. Ọ bụrụ na ị nweta nseta ihuenyo, ugbu a bọtịnụ ga-apụta ihichapụ ya nri n'akụkụ bọtịnụ òkè.
Ọ dịghị ihe dị egwu ma ọ bụ gịnị na-enyere aka ọtụtụ mgbe anyị achọghị nseta ihuenyo na anyị mere.
Nhọrọ maka sistemụ sistemụ dịka iwepu akara ngosi site na ọkwa ọkwa
Na enwere ike ịgbalite ọnọdụ onye nrụpụta n'ụzọ ọzọ ka ihe a na ịpị ọtụtụ ugboro na chịkọtara nọmba ke «About». Na menu nke pụtara na nyocha mbụ "System UI tuner" yiri ka ọ nwere ụfọdụ ọrụ na nyocha nke abụọ a.
Ugbu a You nwere ike wepu akara ngosi dị iche iche dịka batrị, Wi-Fi na ụfọdụ ndị ọzọ site na ngalaba ọkwa ọkwa. Nhọrọ iji gosi pasent batrị dịka ndị ọzọ ga-abata n'aka maka ndị mmepe maka ụfọdụ ebumnuche.
Nchekwa nchekwa na ntọala
Di na nwunye nwere usoro ohuru na echere anyi na nyocha a. Otu maka "nchekwa" nke ahụ na-enye anyị nyocha ngwa ngwa banyere etu esi eji ebe nchekwa na ngwaọrụ gị.
Nhọrọ ọzọ bụ maka gosipụta ojiji RAM. Nwere ike ịhọrọ oge nke 3, 6, 12 ma ọ bụ 24 awa. Na n'okpuru nke a, peeji ntọala ahụ na-egosi ojiji nchekwa, ngụkọta ebe nchekwa, ma ọ bụ ọnụọgụ enwere dị na iche na data ndị ọzọ.
Como siempre chinchi bu ebumnobi ozo na mmelite sistemụ niile si mmepe na nke a bụ kwesiri ngosi na a preview ebe interface, o doro anya na, ka mma na arụmọrụ na nzaghachi.
Otu sekọnd tupu nke ahụ awade mma sensations ma na-anọgide dị ka a Mmepụta version iji kwadebe maka ntọhapụ ikpeazụ nke gam akporo M na mgbụsị akwụkwọ.
Etu esi wunye gam akporo M onye Mmepụta Preview 2
Download Gam akporo M Mmepụta Preview 2 maka Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 na Nexus Player site ebe a.
Iji wụnye ya ị nwere ike jeye ndu-a nke ahụ na - akụziri gị ịwụnye ụdị faịlị na ngwaọrụ gị.
Na-echetara gị mgbe niile na-eso niile usoro mgbe wụnye a ọhụrụ version site na ngwa ADB, nke ahụ kwukwara, OTA ga-abata na ụbọchị ole na ole sochirinụ ka ị nwee ike ịchekwaa onwe gị iji aka gị rụọ nrụnye ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Gịnị bụ ihe ọhụrụ na gam akporo M Onye Mmepụta Preview 2
[Mgbọrọgwụ] [APK] Download na wụnye ihe nkwụnye ọhụrụ maka gam akporo M onye nrụpụta Preview 2 tupu onye ọ bụla ọzọ